हे भग’वान यो के भयो, ८ महीने ब’च्चा बोकेर गोर्खा देखी रुदै सबीना आइन इन्द्रेनीमा (भिडियो हेर्नुहोस) – Onlines Time
December 23, 2020 December 23, 2020 onlinestimeLeaveaComment on हे भग’वान यो के भयो, ८ महीने ब’च्चा बोकेर गोर्खा देखी रुदै सबीना आइन इन्द्रेनीमा (भिडियो हेर्नुहोस)
हाम्रा योजनाहरू छरपस्ट र ‘पपुलिस्ट’ छन्, जसले चुनाव त जिताउलान् तर थला परेको स्वास्थ्य सेवालाई माथि उठाउँदैनन् । एमबीबीएसपछि झन्डै अढाई वर्ष स्थानीय तहमा काम गरेको तथा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारको अभियानमा संलग्न भएको अनुभवका आधारमा म यो भन्दै छु । पछिल्ला केही दशकका सामाजिक आन्दोलनहरूलाई हेर्ने हो भने, डा. गोविन्द केसी नेतृत्वको चिकित्सा शिक्षा सुधारको आन्दोलन सम्भवतः अग्रस्थानमा पर्छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन बनेर सोअन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएसँगै यो अभियान निष्कर्षको नजिक पुगेको छ । चिकित्सा शिक्षा सुधारको यो अभियानले समग्र स्वास्थ्य सेवालाई चाहिँ कति सकारात्मक असर पार्ला त ? स्वास्थ्य प्रणालीको कायापलट नभएसम्म चिकित्सा शिक्षा सुधारले मात्रै स्वास्थ्य सेवामा उल्लेख्य सुधार हुने देखिँदैन । स्वास्थ्य सेवा सुधारको एउटा पूर्वसर्त स्वास्थ्य शिक्षा सुधार भए पनि त्यो आफैंमा पर्याप्त भने होइन । समाजवादतर्फ उन्मुख भनिएको हाम्रो देशमा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको बहस गर्नुअगाडि स्वास्थ्य सेवा प्रणालीसामु विद्यमान चुनौती र समस्याहरूलाई नियालौं ।
स्वास्थ्य सेवा बिमा
अमेरिका संसारकै सबैभन्दा खर्चिलो स्वास्थ्य सेवा भएको देश हो । एक अमेरिकी नागरिकले स्वास्थ्यमा वार्षिक औसत १० हजार अमेरिकी डलर खर्च गर्छ जुन उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा दिन भनेर चिनिएका बेलायत र फ्रान्सको भन्दा झन्डै दुई गुणा बढी हो । महँगो सेवाका कारण मध्यमवर्गीय अमेरिकी अहिले पनि बिरामी हुने हो भने आर्थिक रुपमा टाट पल्टिने अवस्था छ । स्वास्थ्य त्यहाँको राजनीतिको मुख्य एजेन्डा भए पनि निजी कम्पनीहरूको प्रभावले गर्दा एकीकृत र सबैलाई समेट्ने बिमा कार्यक्रम अहिलेसम्म आउन सकेको छैन ।
केही वर्षअघि सुरु भएको हाम्रो बिमा कार्यक्रम केही प्रतिकूलताका बीच आम नागरिकले मन पराएका हुन् । सरकारी संस्थाहरूमा नआउने नागरिकहरू पनि बिमामा आबद्ध भएर सरकारी अस्पतालमा उपचारका लागि आए । तर बिमा कार्यक्रमका केही कमजोरी र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा व्याप्त कमजोरीहरूका कारण बिमा नवीकरणको दर न्यून छ । हाम्रो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी विकेन्द्रित विशेषज्ञ तहको सेवा नै नहुनु र बिमा हुँदाहुँदै टाढाका निजी अस्पतालमा खर्चिलो उपचार गर्न जानुपर्ने बाध्यता हो । बिमा कार्यक्रमको लक्ष्य पूरा गर्न केही ठोस कदम चाल्नु जरुरी छ । जस्तो कि, सबै जिल्लामा विस्तार गर्ने, उपचार खर्चको दायरा फराकिलो पार्ने, औपचारिक पेसाका कर्मचारीहरूको पारिवारिक बिमा अनिवार्य गर्ने, गरिब र वृद्धहरूको बिमा सरकारले निःशुल्क गर्ने, दीर्घरोगीहरूलाई सरकारले गर्दै आइरहेको सहयोग बिमामै समाहित गर्ने र डा. केसीले माग गरेझैं विशेषज्ञ तहका ठूला अस्पतालहरूलाई देशभर पुर्‍याउने । होइन भने कोही बिरामी पर्‍यो भने या त अस्पताल नै जान नसकेका वा अस्पताल गइहाले घरखेत बेच्नुपरेका वा चन्दाको याचना गरेका समाचारहरू पढिराख्नुपर्ने हुन्छ ।
स्वास्थ्य सेवाको विकेन्द्रीकरण
टिचिङ र वीरजस्ता केन्द्रीय अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप अत्यधिक छ र अपेक्षाकृत सेवा दिन सकेका छैनन् । वीर अस्पतालमा उपचार गराउन दूरदराजबाट आएका बिरामीले पाएका दुःख हामी पत्रिकामा पढेर आक्रोशित हुन्छौं तर सामान्य समस्याका लागि काठमाडौं आउनैपर्ने अवस्था कसरी बन्यो, बहस गर्दैनौं । अहिलेको टिचिङ अस्पतालजस्तो संरचना र सेवा प्रवाह प्रत्येक प्रदेशमा खोल्न सके मात्र केन्द्रीय अस्पतालको चाप घट्छ र यी अस्पतालहरू नवीन पद्धति भित्र्याउनमा केन्द्रित हुन सक्छन् । कलेजो प्रत्यारोपणदेखि हर्नियाको शल्यक्रिया गर्नसम्म केन्द्रीय अस्पताल नै धाउनुपर्ने अवस्था रहेसम्म अहिलेकै भीड र ‘गुणस्तर’ पनि कायम रहिरहन्छ ।अहिलेको स्वास्थ्य योजनाले प्रत्येक वडामा एक स्वास्थ्य एकाइ (हेल्थ पोस्ट) र एक स्थानीय तहमा चिकित्सकसहितको अस्पतालको कल्पना गरेको छ ।
त्यसै गरी पहिलेका जिल्ला अस्पताल र कतिपय क्षेत्रीय अस्पतालहरूलाई प्रादेशिक अस्पतालहरूमा रूपान्तरण गरिएको छ । यी योजनाहरू मन्त्रालयका दराजमा थन्किएर बसेका थिए, पछिल्लो उद्घाटन कार्यक्रमहरूबाट यी अवधारणाहरू कार्यान्वयनतर्फ अघि बढेका छन् । तर हाम्रो सधैंको समस्या के हो भने, स्वास्थ्य संरचनाको वर्गीकरण सेवाको उपलब्धताका आधारमा नभएर बेडको संख्या हेरेर गरिएको छ । अस्पतालले एक्सरे/भिडियो एक्सरे, ल्याबजस्ता आधारभूत सेवा प्रवाह गर्न सकेका हुँदैनन् तर अस्पतालको बेड बढाएर उद्घाटन गर्न हतार हुन्छ । त्यसैले नाम वा बेड नभई सेवाका आधारमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको वर्गीकरण हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि, लुम्बिनी प्रदेशका सबै सरकारी अस्पतालमा गरी ७ सयभन्दा बढी नै बेडहरू त छन्, तर पूरै प्रदेशभरि कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा एमआरआईको सुविधा छैन । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, बुटवलमा बेड तीन सयभन्दा बढी नै भए पनि सीटी स्क्यानको सेवा एक वर्षअगाडि मात्रै सुरु भएको हो र यो पूरै प्रदेशभरिकै एक मात्र सीटी स्क्यान सेवा हो । यसले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको दुरवस्था र जटिलता चित्रित गर्छ ।
जनशक्तिको आवश्यकताको मूल्यांकन र परिचालन
स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने नेतृत्व अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोगको हातमा पुगेको छ । उत्पादित जनशक्ति कहाँ कति संख्यामा परिचालन गर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी हो । तर गठन भएको छोटो समयमै यी दुई संस्थाबीच कलह सुरु भइसकेको छ । जनशक्ति उत्पादन गर्ने आयोगको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने फुर्सद मन्त्रालयलाई छ तर कुन जनशक्ति कति संख्यामा चाहिएको छ, त्यसको अध्ययन गर्ने फुर्सद छैन । पाँच वा दस वर्षको एकीकृत योजना बनाएर नेपालको स्वास्थ्य सेवाको संरचना कस्तो हुने र कुन तहको सरकारको भूमिका के हुने, स्पष्ट भए मात्र महसुस गर्न मिल्ने परिवर्तन हुन सक्छ ।
निकै कम देशहरूमा मात्रै एमबीबीएस सकेका चिकित्सकहरूले स्वतन्त्र रूपमा बिरामी हेर्छन्, धेरै देशमा विशेषज्ञ (जनरल प्राक्टिसनर) ले नै हेर्छन् । तर हाम्रो देशमा पहुँच हुनेहरू सीधै विशेषज्ञसम्म पुग्छन् भने दूरदराजमा अहेव, हेल्थ असिस्टेन्ट वा तालिम नै नलिएका अदक्ष जनशक्तिहरूकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । अबको पाँच–सात वर्षमा सबै पालिकाका अस्पतालमा विशेषज्ञहरू पुर्‍याउने लक्ष्य राख्नुपर्छ । सँगै के स्पष्ट हुनुपर्छ भने, विशेषज्ञसँगै एमबीबीएस चिकित्सकहरू र अन्य प्राविधिक, औजार/उपकरण, शल्यक्रिया, आकस्मिक कक्ष लगायतका सेवा सञ्चालनका आवश्यक बजेट एवं सामग्रीहरू पनि पठाउनुपर्छ ।
खाली भवन र डाक्टरले मात्र अस्पताल बन्दैन । प्रत्येक पालिकामा जनरल प्राक्टिसनरसहितको सेवा पुर्‍याउने र बाँकी सेवाका लागि रिफरल व्यवस्थित गर्दा नागरिकले घरनजिकै गुणस्तरीय सेवा पाउँछन् र केन्द्रको भीड पनि घट्छ । आयोग र मन्त्रालयबीच उचित समन्वय हुन सके यो सम्भव छ । यदाकदा प्रत्येक वडामा चिकित्सक पुर्‍याउने पपुलिस्ट राजनीतिक गफहरू पनि सुनिन्छन् । चिकित्सकसँगै अरू थुप्रै प्रविधि र प्राविधिकहरू पठाउन नसके यसको प्रभावकारिता न्यून हुन्छ ।
सीमित स्रोतहरू कनिकाजसरी छर्नुभन्दा एकीकृत लगानी गरी प्रत्येक पालिकामा आधारभूत सुविधासहितको अस्पताल खोल्नु नै बढी बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ । अहिलेका हेल्थपोस्टहरूमा जनस्वास्थ्यकेन्द्रित प्रतिरोधात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ र चिकित्सकबाहेक अन्य प्राविधिक (अहेव, हेल्थ असिस्टेन्ट) को उपचार अब ‘फेजआउट’ गर्दै लैजानुपर्छ ।
स्वास्थ्यकर्मीको तलब, भत्ता, सुविधा
चिकित्सकलाई गाउँगाउँ पुर्‍याउने कुरा आइरहन्छ तर न चिकित्सकको पर्याप्त दरबन्दी छ न उचित तलब र सुविधा । बीस वर्षअघिकै स्वीकृत दरबन्दी हालसम्मै कायम छ, करिब १५ सय मात्रै । आफ्नो परिवारको आवश्यकता पूरा नहुने तलबमा चिकित्सक दूरदराजमा गएर करारमा काम गर्न नमान्नु स्वाभाविक हो । स्थायी चिकित्सकको विज्ञापन खुल्दा अहिले पनि आवेदकको भीड लागिरहेकै छ, तर सरकारले स्वास्थ्य सेवाको संवेदनशीलता नबुझ्दा दूरदराजमा दक्ष जनशक्तिको अभाव कायमै छ । वर्षौं मिहिनेत गरेर सिकेको सीपको उचित मूल्य नपाउँदा चिकित्सकहरू बिदेसिन बाध्य छन् । सरकारी अस्पतालहरूमा मात्रै काम गरेर आफ्ना आवश्यकता पूरा हुने भए अस्पतालहरू पनि थप गुणस्तरीय बन्दै जानेछन् ।
युवा चिकित्सकहरूमाझ विद्यमान अवस्थाप्रति नैराश्य भएकाले उनीहरू पलायन हुनुलाई सर्वोत्तम विकल्प ठान्छन् । समस्या समाधान गर्नभन्दा सरकार चिकित्सकहरूलाई अझ निचोरेरै तह लगाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित छ । पहिले तीस वर्षको उमेरसम्म विशेषज्ञताको पढाइ सकेर करिअर सुरु हुने अवस्था थियो, अहिले विभिन्न बन्देज सिर्जना गरेर चालीस वर्ष उमेरसम्म त अध्ययन गर्नै लाग्ने अवस्था छ । चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरू खुसी भएर खटिने अवस्था सिर्जित भए मात्रै बिरामी–स्वास्थ्यकर्मी सम्बन्ध सुध्रन्छ र विश्वासको वातावरण बन्दै जान्छ ।
अन्तमा, शिक्षा र स्वास्थ्यमा समेत निजीलाई व्यापार गर्न खुला छोडेपछि थुप्रै विकृति निम्तिएका छन् । खुलिसकेका निजी स्वास्थ्य संस्थालाई बन्द गराउनेभन्दा तिनको अनुगमनमा कडाइ गर्दै निजीको उपस्थितिलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हो र यो खर्चिलो त हुन्छ नै, तर अप्ठ्यारोमा परेका जनतासँग राज्य जोडिने माध्यम पनि स्वास्थ्य सेवा नै हो । एकीकृत योजना बनाएर स्वास्थ्यमा पर्याप्त लगानी गर्ने र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै नागरिकको स्वास्थ्यप्रतिको राज्यको दायित्व महसुस गरेर काम गर्ने हो भने हाम्रो स्वास्थ्य सेवामा सुधार सम्भव छ ।
पोखरामा भेटिय एस्ता आमाछोरी, पहिलोपटक संसार रुहाउने आमाछोरीको कारुणिक दोहोरी Riya Khadka & Rati (मन थामेर भिडियो हेर्नुहोस्)
श्री’मान र १४ बर्सकी छोरीको मृ*त्युपछी परिवारमा यस्तो बि*चल्ली , का*जकिरि*या गर्ने खर्च छैन, भिडियो हेर्नुहोस (सहयोग काे लागि सेयर गराै)
July 11, 2021 July 11, 2021 onlinestime
कन्चनको कोठामै पुग्दा बाहिरियो ड रलाग्दो र हस्य,ब’लजबस्ती बि’बाह भन्नेलाई प्रत्यक्ष्यदर्शी ठाडो चु नौती
हात खुट्टा न भएर पनि महिनाको ५ करोड कमाऊँछु ! (एक पटक पढ्नै पर्ने)
June 27, 2021 onlinestime